Sida loo rakibo Docker Linux Mint 18 Sarah | Laga soo bilaabo Linux
Wax badan baa laga sheegay docker, mashruuca isha furan ee noo ogolaanaya in aan wax ka qabanno konteynarrada, oo si isku mid ah ugu eg mashiin dalwaddo ah, in kasta oo si fudud oo fudud lagu fulin karo. Si aan aqoon dheeraad ah ugu lahaado tikniyoolajiyadda iyo aragtida ah in malaha maalmaha soo socda qof aan u arko inuu khabiir ku yahay Docker lagu dari doono kooxda, waxaan keenay maqaalkan oo na bari doona sida loo Sida loo rakibo Docker Linux Mint 18 Sarah.
1 Waa maxay Docker?
2 Sida loo rakibo Docker on Linux Mint habka dhaqanka
3 Sida loogu rakibo Docker Linux Mint si otomaatig ah
Annaga oo soo xiganeyna Wikipedia waxaan dhihi karnaa «Docker waa mashruuc furan in waxay ku shaqeysaa arjiga hawl galka kombiyuutarada, iyagoo siinaya lakab dheeri ah iyo soosaarida otomaatiga ah ee heerka nidaamka hawlgalka ee Linux«.
En pocas palabras, Docker wuxuu noo ogolaanayaa inaan horumarinno codsiyada adiga oo aan ka werwerin in koodhkeennu ka shaqeyn doonin mishiinka uu ku socon doono.
Sida loo rakibo Docker on Linux Mint habka dhaqanka
Si loo rakibo nooca ugu dambeeya ee Docker (docker-engine) Linux Mint 18, waa inaan raacnaa tilmaamaha ku jira Tilmaamaha isticmaalka hagaha. Marka la soo koobo, waxay asal ahaan ka soo raaceysaa xirmada keydka ay maamusho Docker.
Sida loogu rakibo Docker Linux Mint si otomaatig ah
Waxaa jira dariiq aad u fudud oo otomaatig ah oo loo maro rakibi Docker Linux Mint iyo asal ahaan waa fulinta hawlgal fuliya dhammaan amarrada lagama maarmaanka ah, si loo helo loona rakibo sidan oo kale waa inaad fulisaa amarrada soo socda:
Shaki la'aan dhowr dariiqo oo dhaqso ah oo lagu rakibo Docker, taas oo ah tiknoolajiyad ay tahay inaan dhammaanteen bilowno inaan ogaano iyo gaar ahaan inaan horumarinno. Maxaad ka aaminsan tahay Docker?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo rakibo Docker Linux Mint 18 Sarah
Haddii rakibidda Linux Mint ay waalli kuu wado, ogow in .shka aad soo dejisay uusan lahayn kala-badh badh laakiin uu hoosta ka xarriiqayo.
Jawaab Victor Lopez
Xitaa markaan raaco talaabooyinka, kaliya waxaan helayaa qaladkan
Waa lagu guuldareystay in la bilaabo shaqada docker.service waa waji qarsoon yahay